iholide ngasinye uhlobene nathi nge ngendlela ethile, okubangela eziningana izinhlangano: ezibukwayo, olfactory, alalelwayo ... Unyaka omusha, yebo - isihlahla sikaKhisimusi, izipho, Christmas songs, iphunga tangerines. Mashi 8 - ithengiswe emgwaqeni ngowokuqala entwasahlobo izimbali, iphunga obucayi mimosa. Meyi 9 - kuze kudabuke umhlane yonke indawo, iphunga roses lilacs, ngokuphindaphindiwe ukuzwakala ingoma "Ukunqoba Day".
Kodwa yokuqala ka-May kuzo zonke izizukulwane ezahlukene ezweni lethu ngenxa izenzakalo ezahlukene. Isizukulwane esidala ukhumbula grand woSuku Luka-May ukuboniswa, lapho wonke umuntu - abantu abadala nezingane - amafulegi nezibhengezo babe amakholomu emgwaqweni omkhulu njengoba ezwakale ezihlekisayo iculo, futhi ngemva ukuboniswa, sonke saya osebeni emifuleni, Grove ukuphuma khona ithanga bemvelo entwasahlobo , ukugubha usuku International womfelandawonye abantu abasebenza emazweni onke. Abantu babekholelwa ngokuqinile ukuthi ngempela celebration emhlabeni wonke isintu lesichubekako (nakuba yaphawula kule isimo kuphela amazwe sezenhlalo Commonwealth).
Abantu abasha ukwazi 1 Meyi njengoba Spring futhi Labor Day, eyayilinyazwe ngokuthi kakade okuthunyelwe. Ngo-1997, uhulumeni omusha Russian unqume ukuba bahoxe ozithandayo entwasahlobo iholide lakho kokuseshwa zezombusazwe. Qaphela sathathwa ukuthi lezi amaholide (futhi ngokuvamile wenza okungaphezu kwalokho: 2-3) abantu kangaka badunyiswa njengabantu abasebenza ezindaweni zabo suburban, e izivande namahlathi. Ngemva Meyi 1 - Labor Day, okuyinto feeds ngonyaka. Ngakho-ke, Labor Day uhlala ngokuvumelana negama layo.
Kungenxa nalesi ukubaluleka 1 Meyi Holiday Spring and Labour, kugujwa ngisho eminyakeni eyizinkulungwane edlule. Ngalezo zikhathi lasendulo, abakhileyo Italy ezinsukwini entwasahlobo ikakhulukazi ngenkuthalo ziqondiswe unkulunkulukazi ezolimo nenzalo Maya. Bathandazela ke, ezihlatshelwe unkulunkulukazi inhlanhla ithumele abantu ongumlimi ngokoqobo. Ukuze kuhlonishwe Maya futhi yaqanjwa ngenyanga edlule kwentwasahlobo, ngemvelo yakhelwe ukubeka kwesivuno esizayo.
Kulesi Labor Day angahlangene nezombangazwe lugujwa-May 1, futhi namuhla emazweni amaningi, ezinjenge-Austria, eSpain, eNgilandi futhi lapha, eRussia.
Political umthunzi Mayday wathola ngo-1889. Ngemva izibhelu wamavukelambuso phakathi kwabasebenzi kanye capitalists Chicago (USA) Okwesibili International wanquma immortalize lo mcimbi Happy International Basebenzi wonke amazwe ngo-May 1. Ngaphambi inguquko ngosuku iqembu lezisebenzi okuqhubekayo-nomqondo waphuma ngo-May Day, ukukhuluma nokuvikela sabasebenzi futhi ekulahleni inqubomgomo kahulumeni tsarist kanye nonxiwankulu. Lokhu woSuku Luka-May mibuthano yayiqhutshwa uhlobo izifundo Political, kusho ze ka kwamaBolshevik imibono ngendlela yokubuthanela abasebenzi yaba ibutho olulodwa wamavukelambuso.
Ngakho-ke, ngoMeyi 1 kwaba omunye ngamaholide ideologically iningi eSoviet Union.
Njengoba sekunama-amabutho lensha yentsandvo yelinyenti kushintshile futhi yekuphila. Sashiya enkundleni main kwezifiso lamaKhomanisi. Futhi Mayday phathelana kancane kancane balahlekelwa orientation yayo zangaphambilini zezombusazwe. Kodwa ophucwa iholide, lokhu ayijwayele, kwakungenakwenzeka. Ngakho sanquma kabusha, egcizelela lyrical entwasahlobo zabasebenzi izinhlangothi.
Labor Day kwaba ngaphandle imiboniso ubunye yesigaba sabasebenzi, kodwa emadilini bendabuko kanye namanye esake sawenza sisendleleni. Futhi, ngokuvumelana nesiko endala kakhulu, usuku zabasebenzi woSuku Luka-May imakwe umthelela emibhedeni futhi zezimbali. Nokho, kwabaningi nomkhulu bethu ngalolo suku namanje ngosuku ubunye emzabalazweni amalungelo abantu abasebenza. Futhi uye ku imibuthano futhi May Day, futhi adalule has uhulumeni wentando yeningi. Kodwa ezinhlwini zabo ukuba siya sincipha isibalo sawo njalo ngonyaka.
Ukuze isizukulwane esikhona nesizayo May 1 okuzohlobana ne zezimbali, iphunga emhlabeni fresh futhi utshani, icula. Uma-May 1 futhi kuyoba ngosuku emzabalazweni, izinambuzane kuphela izingadi.
Lokhu isinongo kumele kube oyingozi. iresiphi adzhika
Isaphulelo amakhuphoni Petersburg
"Altai elixir" - umthombo ubungqabavu